Yiba phezu sill iwindi efulethini into yakhe exotic eziningi ekusweleni. "Izivakashi" okungajwayelekile kusukela ezishisayo kanye ezingwadule, kusukela amabhange ase-Amazon noma Ezimfundeni eziphakeme zihlale uyabukeka emehlweni futhi kuyakha. Kungani ungenzi endlini hhayi kuphela amahle isitshalo ezingavamile, kodwa futhi ewusizo? Omunye walena uwukuba le osmanthus. Yini laziwe ezweni lethu ezimbalwa njengoba kuqabukela kutholakale ke ezitolo noma amakhaya.
Incazelo bohlobo lwe
Lolu hlelo olunesihloko esithi "osmanthus" ihlanganisa uhlobo izihlahla lezihlahla. Bonke basonta omnqumo umndeni. izitshalo Homeland - emahlathini asezindaweni ezishisayo-Asia kanye eCaucasus. Osmanthus akuyona ithandwe futhi kusakazeke eRussia, ezifana e China. Kukhona-ke kutshalwa iminyaka engaphezu kwenkulungwane, futhi hhayi kuphela njengenhlangano Ornamental, kodwa futhi njengoba isitshalo okwelapha. Nge osmanthus exhumene legends nezinkolelo eziningi, it is ngokwesiko kubhekwe uphawu lothando nokwethembeka. Izitshalo yalolu hlobo - esiyize noma isihlahla ne dark amahlamvu kanzima obuluhlaza imiphetho bushelelezi noma serrated. Osmanthus izimbali kungaba umbala amhlophe noma aphuzi, bona sizibonise a Iphunga eqinile ukuthi ngezinye izikhathi uma kuqhathaniswa iphunga magnolia kanye jasmine.
osmanthus olunephunga elimnandi
Isikhathi esining impela ke kungatholakala ngaphansi igama itiye noma umnqumo elimnandi. izitshalo Homeland - Wik Japan, zaseHimalaya nezase China. Ngaphansi kwezimo zemvelo, kuba umuthi noma izihlahlana kuze kube ngamamitha amathathu. Izimbali kungaba amhlophe noma aphuzi, kuncike sesitshalo, uzwa imisindo evame ukuzwakala evelele amnandi. osmanthus Sweet-olunephunga elimnandi - isitshalo yokubukisa kakhulu namahlamvu obunesikhumba ukuthi abe onqenqemeni serrated. Emvelweni, uqala eziqhakaza Septhemba futhi uyaqhubeka kuze entwasahlobo.
Osmanthus sikhula kancane kancane ngokwanele, kodwa linesizotha nesomiso ukumelana. It luyokhula cishe kunoma iyiphi inhlabathi. Outdoors ezimweni zethu zezulu osmanthus hhayi sibambelela ngoba abazi ukumelana iconsi isikhathi eside e lokushisa ngezansi zero. Kodwa-ke uzobe ngempela zokuthi bazizwa benethezekile kuleli izimo egumbini. Uma ufuna ukuba ukhule isihlahla a bonsai, futhi kulesi simo igama osmanthus ephelele (isithombe ngezansi).
Indlela ukukhetha inhlabathi
Osmanthus nekapriznoe isitshalo, kodwa namanje ekukhuleni engcono nokuthuthukiswa kufanele inake ezinye umehluko wemisindo nemiqondo yamagama. Indawo efulethini kungcono ukukhetha ezigqamile, isibonelo ku window eningizimu, futhi ngo-entwasahlobo nasehlobo alenze kuze Loggia, kuvulandi noma ithala. Kungcono ukukhetha umhlabathi othile osebenzelana kancane acid noma hlangothi. Isilinganiso ekahle kuyoba 2: 1 (umhlaba lula evundile Peat). Qiniseka ukuthi badinga amanzi okuhle, ngakho phansi imbiza kufanele sibeke ukhonkolo block, futhi inhlabathi engeza indawo umfula isihlabathi. Cutting isitshalo akudingi, njengoba lokhu kuzonciphisa izimbali zalo.
Ukuveza nge imbewu kanye cuttings
Indlela yokuqala lide kakhulu, njengoba izithombo kufanele ulinde izinyanga eziyisithupha okungenani, uma kungekhona ukuthi sisebenza kakhulu. Ngaphezu kwalokho, phezu imbewu freshness kuncike ngokuqondile. Uma sebekhulile, kubalulekile ukuba afeze babhekane nezinga elikhulu ukuba osmanthus ngiphilile futhi nginamandla. Kuyini, wonke umuntu uyazi Florist - nokugcina imbewu ezingeni lokushisa ethile ngoba ukuhluma yabo kangcono (i osmanthus - izinyanga ezintathu ukufudumala okufanayo emakhazeni). Kulula kakhulu asakaze isitshalo by cuttings semilignified. Nqumani isidingo sabo ngoJulayi. Ngemva kwalokho, amahora ambalwa ukuze ome obmoknut locezu ekukhuleni impande ivuselela kanye ingxube Peat nesihlabathi. Nini izimpande, kubalulekile ukuba uhlale phansi osmanthus abasha izimbiza ahlukene.
Ukunisela futhi zitshala
Ukunisela ngesikhathi sokukhula olunzulu (ebusika) ukuba uchichima lonke isikhathi - ngokulinganisela, akufanele bavunyelwe amanzi amile emhlabathini, kodwa asipheli owomileyo. Osmanthus ukuthandwa umoya onomswakama, ngakho sishaye nsuku zonke ngeke nje kuphela kukuzuzise kuye. Ngezinye izikhathi kungenzeka ukuhlela isitshalo lemvula eshaweni, kanti amacembe kufanele ahlanze ngendwangu emanzi kusuka ukuqongelela uthuli. Kanye ngenyanga ngesikhathi yokukhula kufanele uyophuziswa osmanthus amaminerali eziyinkimbinkimbi noma Umanyolo eziphilayo.
Isitshalo kumele repotted kuphela uma kunesidingo. Osmanthus uncamela sikhule close imbiza, kuze kube isikhathi lapho izimpande musa uligcwalise ngokuphelele. izitshalo Young zidluliselwa njengoba ikhula, futhi wonkana kuyoba okwanele ukuze ushintshe kuphela ungqimba phezulu inhlabathi.
Gui Hua Cha Hong (itiye obomvu kanye osmanthus): Kuyini lokhu?
Lena mkhiqizo ehlukile ekhiqizwa e-China. Original Hong Hua Gui Cha okulungiselelwe kusukela izinhlobo elite obomvu itiye, okuyinto has a ayegcwele kakhulu Ukuthoma ukunambitheka ezivela izinga eliphakeme lwezithelo olubangela ukubila. Sikhula izifundazwe kuphela ezintathu Chinese. Isithokela isiphuzo usebenzisa iresiphi ubudala, isithako zako ezisemqoka - osmanthus. Kuyini futhi kanjani ukuyisebenzisa, uyazi cishe zonke izakhamuzi zomphakathi Isifundazwe Guangxi eChina, ngoba isignesha yabo isiphuzo. Sebenzisa ezimbili kuphela izinhlobo osmanthus, izimbali okuyinto izinsuku 10-15 nje, ngakho-ke iwumkhiqizo eliyingqayizivele, futhi isibalo itiye bangempela elinganiselwe.
Uma - umnikazi wesikhwama wajabula kakhulu isitshalo, isiphuzo kungenzeka ukupheka ekhaya. Ngenxa yalesi imbali osmanthus kufanele kuqala omisiwe ekamelweni lokushisa (kwelanga hhayi ngqo) bese phisa. I ukumnika usetshenziswa njengesibonelo isiphuzo ezimele noma kwengezwe itiye elimnyama. Anakho ukunambitheka kakhulu futhi ukuzola lula, eziphumulele umphumela. Kuqukethwe imibala amafutha abalulekile Kusizuzisa emzimbeni futhi sikwazi ukubhekana ngokuphumelelayo ukukhwehlela.
Uma utshala osmanthus ekhaya, asisoze ngeke uzisole. Lesi sitshalo uzokunika isimo enkulu futhi bayojabulela umphumela wawo zokuhlobisa, futhi ngaphezu kwalokho, bayokujabulela ebusika kusihlwa abandayo zithokozise ingilazi itiye izimbali elimnandi.
Lilac Katherine Havemeyer (ezivamile): inkomba Botanical
Ikhathuni izilwane njengoba Amaqhawe isikhathi sabo
Ikhamera ye Canon 5D Mark 3: ukubuyekezwa, ukucaciswa nokubuyekezwa. Ukuqhathaniswa nabancintisana